शनिबार यसरी बिताउनु भयो भने शनिदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ
HomeDharmaशनिबार यसरी बिताउनु भयो भने शनिदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ
न्यायका देवता शनिदेवले मानिसको राम्रो र नराम्रो कर्म अनुसार फल प्रदान गर्नुहुन्छ। शनिबारलाई शनिदेवको दिन मानिन्छ । शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्न शनिबारको दिन केही विशेष उपाय अपनाउनु पर्दछ । आउनुहोस् यी उपायहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
शनिबार स्नान आदिबाट निवृत्त भएर कालो रंगको कपडा लगाउनुस् । विधि अनुसार शनिदेवको पुजा गरौ । शनि यंत्रको पनि पूजा गर्नुहोस्। यसो गर्नाले जागिर, पैसा वा व्यापार सम्बन्धी समस्या समाप्त हुन्छ। भगवान शिव शनिदेवका गुरु हुनुहुन्छ। शनिबारको दिन भगवान शिवको पूजा गर्नाले शनिदेवको पनि आशीर्वाद मिल्छ । हनुमानजीको पुजाका लागि पनि शनिबार विशेष मानिन्छ । शनिबार हनुमान चालिसाको पाठ गर्नाले हरेक दुखबाट मुक्ति मिल्छ ।
जीवनमा उन्नतिको बाटो छ। शनिबारको दिन तिल वा तोरीको तेलको छायाको भाँडो दान गर्नुपर्छ । शनिबारको दिन कालो कुकुरलाई तोरीको तेलमा रोटी खुवाउनुहोस्, यसले संचित धनमा वृद्धि हुन्छ । शनिबारको दिन पिपलको रुखमुनि दियो बाल्नुहोस् । हरेक शनिबार बिहान र बेलुका तुलसीको बोटमा दीप प्रज्वलन गर्नुहोस् । शनिदेवको मन्दिरमा तोरीको तेलको दियो बाल्नुहोस् र शनिदेवलाई कालो उडद वा कालो तिल पनि चढाउनुहोस्। शनिबार खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। यसो गर्नाले शनिदेव प्रसन्न हुन्छन्। शनिबार फलाम, कालो वस्तु, छाता, उडदको दाल, छालाको जुत्ता किन्नु हुँदैन ।
शनिबार गहुँ पिसेर त्यसमा कालो चना मिसाएर खाने । यसले आर्थिक समृद्धिको वरदान दिन्छ । यस दिन कसैलाई झुट बोल्न, धोका दिनु, कसैलाई अपमानित गर्न नभुल्नुहोला । यसो गर्दा शनिदेव क्रोधित हुन्छन्। शनिबार साँझ कालो कुकुर वा कालो गाईलाई रोटी खुवाएमा सबै मनोकामना पूरा हुन्छन् र भाग्य बढ्छ। शनिबारको दिन फलामका सामान किन्नु हुँदैन । यस दिन नुन पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन । शनिबार झाडु किन्नु शुभ मानिन्छ ।
यस आलेखमा दिइएको जानकारी धार्मिक आस्था र धर्मनिरपेक्ष आस्थामा आधारित रहेको जनहितलाई ध्यानमा राखी मात्र प्रस्तुत गरिएको हो ।
Previous articleके तपाईको बेला-बेला हात वा खुट्टा झमझमाउँछ ? हुनसक्छ यस्तो रोगको संकेत
Next articleकरोडपति बन्नेका हातमा यस्ता रेखा हुन्छन्, तपाईको हातमा छ ?
Lakshmi God : यी ४ राशिका मानिसमा सधैँ रहन्छ माता लक्ष्मीको आशिर्वाद !
यस्ता व्यक्तिले भाग्यले होइन आफ्नो मेहनतले पैसा कमाउँछन्